Ny Middle East Airlines dia lasa mpanjifa vaovao Airbus Skywise Health Monitoring
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny Middle East Airlines dia lasa mpanjifa vaovao Airbus Skywise Health Monitoring
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Libanona • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Ny Middle East Airlines dia lasa mpanjifa vaovao Airbus Skywise Health Monitoring.
Amin'ny fampiasana ny sehatra angon-drakitra momba ny fiaramanidina Skywise, ny SHM dia manangona sy mametraka fampandrenesana, vokatry ny sidina-deck, hafatra fikojakojana sns., mametraka azy ireo ho laharam-pahamehana, mampifanaraka ny lesoka rehetra amin'ny fomba famahana olana mifandraika amin'izany.
Ny Middle East Airlines dia hampiasa ny vahaolana ho an'ny fiaramanidina manontolo.
Ny kaompaniam-pitaterana any Beirut dia mampiasa fiaramanidina Airbus rehetra ahitana fiaramanidina A320 sy A330 Family.
Ny SHM an'ny Airbus dia mitsitsy ny fotoana sy ny vidiny mifandraika amin'ny fikojakojana tsy voalamina.
Middle East Airlines (Mea) dia nanao sonia fifanarahana hiditra amin'ny vondron'ireo mpampiasa Skywise Health Monitoring (SHM).
Ny nijoro ela Airbus mpanjifa no ho zotram-piaramanidina faha-50 mampiasa ity fitaovana vaovao ity mba hanatsarana ny fikojakojana ny sambony. Hanohana ny ekipan'ny fikojakojana sy ny injeniera an'ny zotram-piaramanidina ny SHM amin'ny alàlan'ny fitantanana ara-potoana ny hetsika fiaramanidina sy ny famahana olana.
Amin'ny fampiasana ny sehatra angon-drakitra momba ny fiaramanidina Skywise, ny SHM dia manangona sy mametraka fampandrenesana, vokatry ny sidina-deck, hafatra fikojakojana sns., mametraka azy ireo ho laharam-pahamehana, mampifanaraka ny lesoka rehetra amin'ny fomba famahana olana mifandraika amin'izany. Izy io koa dia manasongadina ny fiantraikan'ny asa, manome ny tantaran'ny fikojakojana ny rafitra (avy amin'ny logbook sy ny fampahalalana MIS nangonina tamin'ny Skywise Core ary voatahiry ao amin'ny farihy data), mamela ny fanaraha-maso mahomby ny fampandrenesana. Ho fanampin'izany, afaka manampy ny zotram-piaramanidina hieritreritra sy hanome fitaovana sy kojakoja ho akaiky indrindra amin'ny fiaramanidina.
Mea dia hampiasa ny vahaolana ho an'ny andian-tsambony manontolo. Ny zotram-piaramanidina monina any Beirut dia miasaAirbus fiaramanidina misy fiaramanidina A320 sy A330 Family.
Ny SHM an'ny Airbus dia mitsitsy ny fotoana sy ny vidiny mifandraika amin'ny fikojakojana tsy voalamina. SHM koa dia mifandray amin'ny Skywise Predictive Maintenance (SPM) sy Skywise Reliability (SR) mba hanomezana traikefa an'ny mpampiasa. Fanampin'izany, vonona ny hampiasa ny fahaiza-manao mahery vaika amin'ny zotra vaovao momba ny Flight Operations and Maintenance Exchanger ("FOMAX") vaovao ao anaty sambo izy io - izay afaka misambotra sy mirakitra ireo mari-pamantarana fiaramanidina tena izy 24,000 ho an'ny fanadihadiana manaraka.
Smith Oliver hoy:
Desambra 9, 2021 amin'ny 07:10
Ny fampiasana angona amin'ny fotoana tena izy, ny tatitry ny helpdesk ary ny metrika dia ahafahanao mandrefy ny fihetseham-pon'ny mpanjifa momba ny helpdesk anao. Ny tatitra dia mamorona tatitra namboarina hanampiana anao handrefesana sy hanatsara ny fahombiazany. Freshworks Consultant ao amin'ny https://www.techloyce.com/freshworks-integrations/ dia afaka manampy anao amin'ny fanamboarana ny workflows, vavahadin-tseraseran'ny mpanjifa, ary ny andraikitry ny mpandraharaha mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny orinasanao manokana.